Kitra – Fifanintsanana ny «Can»: hanala vela amin’i Etiopia ny Barea de Madagascar | NewsMada
Kitra – Fifanintsanana ny «Can»: hanala vela amin’i Etiopia ny Barea de Madagascar
Sivy taona aty aoriana, hiverina hihaona indray ny Barea de Madagascar sy ny Wylia Ibex-n’i Etiopia, eo amin’ny fifanintsanana hiadian-toerana ho an’ny «Can 2021», taranja baolina kitra. Hanala vela eto ny Malagasy.
Fanintelony, amin’ny asabotsy 16 novambra, no hikatroka eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika «Can», taranja baolina kitra, ny Barea de Madagascar sy ny Wylia Ibex-n’i Etiopia. Marihina fa indroa resy ny Malagasy, tamin’izany. Raha tsiahivina, nifanintsana, ho an’ny «Can 2012 », ny roa tonta, ny 10 oktobra 2010. Fihaonana mandroso, natao tetsy Mahamasina, ary resiny tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0 ny Malagasy. Mpanazatra frantsay, Jean-Paul Rabier no nitondra ny Barea, tamin’io.
Nanakiana mafy ny haratsin’ny kianja izy, taorian’ny faharesena izay nambarany fa anton’ny tsy fahombiazan’ny Barea. Nesorin’ny federasiona ny tenany, taorian’izay, ary nosoloina an’i Franck Rajaonarisamba. Anisan’ireo mpilalao nandrafitra ny Barea, tamin’izany, ry Voavy Paulin, Johan Paul, sy i Mamy Gervais, i Yvan sy i Bôlida ary i John Baggio.
Ny 8 oktobra 2011, fihaonana miverina, tany Addis-Abeba, mbola niondrika tamin’ny isa mazava 4 no ho 2 indray ny Barea de Madagascar. Gisitra ny Malagasy tao amin’ny sokajy “B”, nisy azy.
Sivy taona aty aoriana, hiverina hidona indray ny roa tonta. Mbola misy ireo mpilalao tamin’izany fotoana izany no mbola mandrafitra ny Barea, ankehitriny. Anisan’izany, i Bolida sy i Voavy Paulin. Eto Madagasikara indray ny fihaonana mandroso ary mpanazatra frantsay ihany koa no hitondra ny Barea de Madagascar. Hamadika ny tantara izany ny Malagasy eto.
Marihina fa tamin’ity, mpilalao mpila ravinahitra no betsaka mandrafitra ny Barea, izay efa manoman-tena etsy Mahamasina. Feno mpijery ny kianja nanatrika ny fanazarantenan’ny Barea, omaly. Efa tonga avokoa ireo mpilalao avy any ivelany, mandrafitra ny Barea. Anisan’ny tonga omaly i Ibrahim Amada, i Njiva, i Morel ary i Abel Anicet ary i Ryan.